On-off eshaweni izandla - China Cixi Zhonghe yenhlanzeko
On-off eshaweni izandla
Amanzi achithekile lapho thina ushawa, imbangela eyinhloko singeke off amanzi time.Now lokhu eshaweni ungakwazi ukuxazulula le problem.When sisebenzisa amanzi afudumele futhi off amanzi, thina uvule futhi, amanzi namanje warm.Can ukugwema nokushintshashintsha kwezinga lokushisa. Rational ukusatshalaliswa eshaweni esidayisa ungagcina amanzi conservation.This eshaweni isandla yakhiwa-ABS, futhi ube electroplate.And ezinhle babe laser boring ku iphaneli eshaweni isandla. Lokhu eshaweni angasuswa, kulula ukususa ngaphakathi.
Amanzi achithekile lapho thina ushawa, imbangela eyinhloko singeke off amanzi time.Now lokhu eshaweni ungakwazi ukuxazulula le problem.When sisebenzisa amanzi afudumele futhi off amanzi, thina uvule futhi, amanzi namanje warm.Can ukugwema nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Rational ukusatshalaliswa eshaweni esidayisa ungagcina amanzi conservation.This eshaweni isandla yakhiwa-ABS, futhi ube electroplate.And ezinhle babe laser boring ku iphaneli eshaweni isandla. Lokhu eshaweni angasuswa, kulula ukususa ngaphakathi.
Previous: On-off eshaweni izandla
Olandelayo: On-off eshaweni izandla
Aluminium Shower Rail Slide Setha
i-Chrome Plated Shower Setha
i-Chrome Shower Rails
Shower anwebekayo esishelelayo Rail
Metal Shower esishelelayo Ibha Rail
Metal Shower esishelelayo Rails
semnyango IKhabhinethi esishelelayo Rail
Shower Door esishelelayo Rail
Shower Umnikazi Bracket
Shower esishelelayo Ibha esishelelayo Rail
Shower Sprayer Umnikazi
semnyango Wall Bracket
Amatebhe isandla eshaweni ZH2055C-3
Amatebhe isandla eshaweni ZH2010W-1